ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးကို မိမိနိုင်ငံနဲ့မဝေးတဲ့စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ လေ့လာတက်ရောက်ချင်တဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် - Crown Education
Feb 14, 2020 globalnews2020, globalscholar_2020, News
Free Reg: https://bit.ly/crownedu_global_2020
Feb 22 : Novotel Hotel, Pyay Room
Feb 23: Mandalay Convention Center
❑ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးကို မိမိနိုင်ငံနဲ့မဝေးတဲ့စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ
လေ့လာတက်ရောက်ချင်တဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် –
❑ (၂၄)နာရီ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သင့်တင့်မျှတမှု၊
❑ USA-UK-Australiaရှိ Rankingမြင့်တက္ကသိုလ်ကြီးများမှ ချီးမြှင့်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Bachelor/Master Degreeများကို အချိန်တိုအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ရယူနိုင်မှု၊
❑ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သွားလာရလွယ်ကူသောနေရာတွင်ရှိပြီး Culture Shockဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါးမှု စတဲ့အချက်အလက်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားရှိသလို အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ Education & Business Hubလည်းဖြစ်တဲ့စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ လေ့လာသင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကကျောင်း(၆)ကျောင်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
1)Singapore Institute of Management GE
(SIM GE Singapore)
❑ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး၊စီမံခန့်ခွဲမှု၊ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာတွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ ကျောင်းများစွာရှိတဲ့အထဲကမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးဘာသာရပ်သင်ကြားပေးနေတဲ့ SIM Singaporeမှာ ယူအက်စ်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် ဖြစ်တဲ့ University at Buffalo, The State University of New York, ယူကေထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ University of Warwick, University of Birmingham, University of Londonနဲ့ သြစတြေးလျထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ RMIT Australia, University of Wollongongရဲ့ Accounting,Banking,Finance,Economic,Business Information,Business Event Management,Logistics and Supply Chain Managementအပြင် အိုင်တီဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ Computer Science,Network,Cyber Securityဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ်တွေကို (၁ဝဝ%)ပညာသင်ဆုနဲ့ လျှောက်ထားသင်ကြားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်။
“SIM Singaporeတွင် လျှောက်ထားနိုင်မည့်
မြန်မာငွေကျပ် (၁၃၂)သိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ SIM Diploma Scholarshipကို Diploma in Accounting, Diploma in Banking and Finance, Diploma in International Business, Diploma in Management Studies, Diploma in Information Technologyဘာသာရပ်တွေအတွက် လျှောက်ထားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် Aprilနဲ့October Intakeတွေမှာ ရွေးချယ်ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး “SIM Diploma Scholarship” ရရှိသူတွေအနေနဲ့ စာသင်စရိတ် (၁ဝဝ%)ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
“Bachelor Degree Scholarship”
SIMရဲ့ Bachelor Degree Scholarshipကို လက်ရှိ SIMမှာတက်ရောက်လျက်ရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသာမက အခုမှစတင်တက်ရောက်မယ့်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေပါ လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Bachelor Degree Scholarshipကို ကျောင်းစာထူးချွန်ထက်မြက်မှုအပိုင်း သာမက Sports and Artsအပိုင်းတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ် March Intake(သို့) October Intakeတွေအတွက် ရွေးချယ်ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး Scholarshipရရှိသူတွေအနေနဲ့ စာသင်စရိတ်သာမက စာမေးပွဲကြေးနဲ့ အခြားသောသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအတွက်ပါ အလုံးစုံကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
2)James Cook University Singapore (JCUS)
❑ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန် Undergraduate / Postgraduate Programတွေသွားတက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေအတွက် စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းတက်ရင်း သြစတြေးလျ Campus ကိုလည်း သွားရောက်တက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့အပြင် သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် Top2%စာရင်းဝင် James Cook University Australiaမှာသင်ကြားနိုင်မယ့်ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကို (၂၅%၊၅ဝ%၊၁ဝဝ%)ပညာသင်ဆု အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့သင်ယူနိုင်မယ့် James Cook University Singapore(JCUS) နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
❑ James Cook University Singapore(JCUS)မှာ ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေ တက်လို့ရမလဲ? ပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းရောရှိလား?
Council for Private Education (CPE) မှပေးအပ်ချီးမြင့်သည့် EduTrust Starကို ပထမဆုံးရရှိထားတဲ့ James Cook University Singaporeမှာ မြန်မာဆယ်တန်း/iGCSE ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားသူများ၊ HNDလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက် Banking & Finance, Financial Management, International Business, Business Intelligence and Information Systems, Marketing, Sports & Events Management စတဲ့ စီးပွားရေးဘာသာရပ်တွေထဲက မိမိစိတ်ဝင်စားရာ ဘာသာရပ်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်သလို IT,Hospitality & Tourism Management, Psychologyဘာသာရပ်များကိုလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
❑ (၂ဝ၁၇) ခုနှစ်မှစတင်ပြီး James Cook University Singaporeက ပေးအပ်တဲ့ပညာသင်ဆုတွေမှာ CROWN Education မှ (၅ဝ%)ပညာသင်ဆုရသူ (၂)ဦးနှင့် (၂၅%)ပညာသင်ဆုအတွက်(၃)ယောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။(၂ဝ၁၈) ခုနှစ်မှာလည်း (၁ဝဝ%) ၊ (၂၅%) အစရှိတဲ့ပညာသင်ဆုအသီးသီးကို CROWN Educationမှ ကျောင်းသား/သူ (၇) ယောက်အထိရရှိခဲ့ပါတယ်။
❑ (၂ဝ၁၉) ခုနှစ်ဇူလိုင်လကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် (၅ဝ%) ပညာသင်ဆု တစ်ဦးနဲ့ (၂၅%)ပညာသင်ဆု (၂)ဦးထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး (၂ဝ၁၉) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် (၁ဝဝ%)ပညာသင်ဆုရကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် (၂၅%)ပညာသင်ဆုရကျောင်းသား(၅)ဦးအထိထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
3)PSB Academy Singapore
❑ PSB Academy Singaporeအနေဖြင့် Edu Trust(Singapore) Certificateအပြင် Education Institution of The Year၊ Best Private Education Institution in Singapore၊ Best Private School in Singapore for Engineering၊ Provider of Largest MBA Programmes Award စသဖြင့် ဆုများရရှိထားတဲ့ ကျောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာအစိုးရပညာရေး ဆယ်တန်းအောင်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊ GCE ‘O’ Level ၊ IGCSE အောင်မြင်ထားသူများအနေဖြင့် Certificate Level မှ စတင် တက်ရောက်နိုင်သလို GCE ‘A’ Level၊ NCC၊ Abe၊ HND ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် Bachelor Degree မှ စတင်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
❑ PSB Singaporeရှိ Diploma Programတက်ရောက်ပြီးသူများအနေဖြင့် UKနှင့် Australiaနိုင်ငံရှိ Coventry University, Edinburgh Napier University (UK), University of New Castle (Australia), University of Wollongong (Australia), Edith Cowan University ထိပ်တန်းကျောင်းများ၏ Bachelor Degree၊ Master Degreeတို့ကို စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ PSB Academyမှာတင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်သလို Australia၊ UKနိုင်ငံတို့ကိုလည်း သွားရောက်သင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိသလို (၂)နှစ်အတွေ့အကြုံရယူလိုသူများအတွက် စင်္ကာပူ(၁)နှစ်+သြစတြေးလျ(၂)နှစ်ဖြင့် Western Sydney University၏ Bachelor of Business Programကိုသင်ကြားခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
4)Nanyang Institute of Management
❑ Civil Engineeringဘာသာရပ်ကို စင်္ကာပူ+သြစတြေးလျ(၂)နိုင်ငံအတွေ့အကြုံများဖြင့် သင်ကြားလိုသူသည့်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊ Hospitality & Tourism Managementဘာသာရပ်ကို စာသင်(၁)နှစ်+လစာရinternship(၆)လဖြင့် သင်ကြားပြီး စင်္ကာပူ+ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် စာသင်(၆)လ+လစာရinternship(၆)လဖြင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ Hospitality & Tourism Managementဘွဲ့ရယူလိုသူကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ Edu Trust4Years ရရှိထားပြီး စာတွေ့+လက်တွေ့ပေါင်းစပ်သင်ကြားမှုတွေမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ NIM (Nanyang Institute of Management)နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
❑ ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံတကာမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုများလာတာနဲ့အမျှ ဘွဲ့တစ်ခုရရှိထားပြီး Career Changesလုပ်လိုသူတွေအတွက် Logistics and Supply Chain Management Industryက ထည့်သွင်းစဉ်းစားရွေးချယ်သင့်တဲ့နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအတွက် Logistics and Supply Chain Management ဘာသာရပ်သင်ကြားတဲ့အါ Nanyang Institute of Management (NIM Singapore)က လက်ရှိ မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးနဲ့ ထိရောက်တဲ့သင်ကြားမှုတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ NIMမှာ အချိန်(၁)နှစ်တက်ရောက်သင်ကြားပြီးတာနဲ့ Purchasing Manager, International Logistics Manager, Inventory Manager, Supply-Chain Manager, Airline Cargo Officer, Procurement Officer, Transport Coordinator စတဲ့ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကလည်း အသင့်စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
❑ မတူညီတဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ကျယ်ပြန့်သောဒီဇိုင်းဘာသာရပ်များကိုလေ့လာသင်ယူလိုသူ မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းနယ်ပယ်မှာProfessionalတစ်ဦးအဖြစ်ခိုင်မာစွာရပ်တည်နိုင်ရန် Raffles Education Groupမှ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
❑ Raffles Education Groupမှာဆိုရင် နှစ်စဉ်နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူပေါင်း (၂)သောင်းကျော်လာရောက်သင်ကြားလျက်ရှိပြီး ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်လိုသူတွေအတွက် Product Design, Design Management, Fashion Design, Fashion Marketing, Visual Communication, Interior Design, Multimedia Design ဘာသာရပ်များအပြင် Animation, Game Design, Jewllery Design, Businessဘာသာရပ်များကို စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာပင် စုံလင်စွာရွေးချယ်သင်ကြားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
6)Kaplan Higher Education Academy
❑ Kaplan Singapore မှာဆိုရင် HND (Business, IT) လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ယူကေထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ Royal Holloway University London ရဲ့ Bachelor of Management with International Business, Business and Management, Management with Marketingစတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ University of Essexရဲ့ Accounting and Finance, Banking and Financeဘာသာရပ်သင်တွေကို စာသင်ကာလ (၁၈)လတည်းနဲ့ တက်ရောက်ရယူနိုင်ပါတယ်။
❑ Double Majorသင်ကြားရယူလိုတွေအတွက် ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင်ပိုမိုအရေးပါလာတဲ့ Psychology and Marketing, Communication and Media Studies, International Business and Cyber Security and Forensics, Management and Business Law, Public Relation and Marketingစတဲ့ဘာသာရပ်အတွဲအစပ်တွေကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ စာသင်ကာလ (၂)နှစ်မှ (၂)နှစ်ခွဲအတွင်း သင်ကြားရယူနိုင်ပါတယ်။
❑ International Schoolsများတွင် Grade (11) ပြီးထားတဲ့ မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်လက်ခံစဉ်းစားပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော စင်္ကာပူပုဂ္ဂလိကကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
❑ စင်္ကာပူနိုင်ငံပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် Singapore Institute of Management GE (SIM GE Singapore) , James Cook University Singapore (JCUS), PSB Singapore, Nanyang Institute of Management (NIM Singapore), Raffles Singapore, Kaplan Higher Education Academy (Kaplan Singapore)တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ intakesအလိုက် ကျောင်းဝင်ခွင့်တွေအပြင် ပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းတွေကိုGlobal Education Fair 2020ပွဲအတွင်း စုံစမ်းလျှောက်ထားနိုင်ရန်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Strategic Ways for Winning Scholarship